အသက္(၁၃)ႏွစ္နဲ႔ ကိုယ္ဝန္(၅)လရွိခဲ့တဲ့ (၇)တန္းေက်ာင္းသူ မိန္းကေလးရဲ့ အျဖစ္... - Online Hartha
အသက္(၁၃)ႏွစ္နဲ႔ ကိုယ္ဝန္(၅)လရွိခဲ့တဲ့ (၇)တန္းေက်ာင္းသူ မိန္းကေလးရဲ့ အျဖစ္…
November 22, 2020 by Online Hartha
မတတ်နိုင်အမေကိုရှင်းပြတော့ပြီး.သမီးရည်းစား ရှိသလားချော့မေးတော့..ရည်းစားတော့မရှိ… အပျိုမဟုတ်တဲ့ အဆောင်နေသူငယ်ချင်း ဆီကဘောင်းဘီယူဝတ်မိ သည်ဟုပြောသည်..လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး..အမှန်အတိုင်းပြောဖို့နည်းနည်းလေး မာန်လိုက်တော့..မှ.တတန်းထဲနေ.သူငယ်ချင်း နှင့်. .ဟုဝန်ခံလာလေသည်
fbပေါ်မှာ ဟိုတလောကေ ခတ်စားနေတဲ့ရေကူးကန်ထဲကိုယ်ဝန်ခုနှစ်ယောက်ရတဲ့. မဟုတ်တဲ့ post ကို ဖတ်ပြီး..အမေကို..ဘောင်းဘီ ကိစ္စနှင့်ဖြီးတော့ အူကြောင်ကြောင်အမေက သို့လောသို့လော ဖြစ်သည်
သမီးတို့အတန်းက..အဲသလို ကြိုက် ကြတာနည်းတယ် 9တန်း 10တန်းဆိုပိုခြိန်းတွေ့ကြတာလို့ပြောတော့ ကမြ ပက်လက်လန် ကျချင်လာသည်…မီတာချမားလို့ ညဖက်ကြောင်းအေပါ်ထပ်တွေ မီးပိတ်ထားတော့ ဘိတွေဖြဈကုန်ကြပြီထင်
ဒါတောင်…ကေလးကသွက်လက်ခကြ်ျခာပုံ.သိပ်မေပါ်ဘော်ဒါဆောင်ကြေးကလည်း..မနည်းပါ.တော်ရုံမိဘ မထားနိုင်တဲ့အနေအထားပါ.. .ဘော်ဒါနွင့် ကိုယ်ပိုင်ကြောင်းတွဲ ဖွင့်ထားပါသည်. သးသျေးခာျခာနေရာလည်းမဟုတ်ပါ
ဒီကိစ္စမြိုးက…ကျမမွ ဖွင့်မေပြာလျင်. .ကိုယ့်ကေလးအတွင်းရေးမို့ ဖုန်းဖိရင်း.. အခြားမိဘ..သတိမထားမိဖြဈနေမွာရော သားမွေးထားသူတွေရော…သမီးမွေးထားသူတွေရောကြောင်းထောင်ထားကြေသာ..သူငယ်ချင်း တွေရောကို သတင်းပေး ချင်ျရ်ရေးပါသည်…
မိဘများ..ဆရာများ.. ခေတ်ကို..သတိထားကြပါ ညဘက်စာကျက်ဝိုင်းများကို..သတိထားကြပါ စာသင်ကျောင်း..စာသင်ခန်းများကိုလည်း.. .သတိထားကြပါလို့…..သတိပေးပါရစေ
Categories သတင္း၊ေဆာင္းပါးမ်ား Post navigation
ဗောဓိရွှေညောင် ထူးဆန်းစွာ ပေါ်ထွန်း ဆုတောင်းသူများ ချက်ခြင်း ထီဆုကြီးများပေါက် (ရုပ်သံ)
တစ်ရွာလုံး ပိုက်ဆံကိုင်ခွင့် မရသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရွာလေး တစ်ရွာ အကြောင်း